Sida loo tirtiro codsiyada | Androidsis
Sida loo dhejiyo codsiyada
Mar kasta oo aan iibsanno taleefan cusub, waxaa lagugula talinayaa in aad nadiifiso mid kasta oo ka mid ah codsiyada aynaan adeegsan doonin iyo in soo saaruhu horay ugu rakibay aaladda, ka dib markii ay gaareen heshiis dhaqaale oo macnaheedu yahay dakhli dheeri ah.
Dhibaatada bloatware (softiweerka ay kujirto aaladda) wuxuu ka bilaabmay ka sameynta yutiilitida shirkadayada taleefanka ilaa codsiyada bixiya inay halkaas joogaan. Barnaamijyadan dhexdooda, waa inaanan tixgalin barnaamijyada google, Maaddaama in badan oo ka mid ah aan aakhirka adeegsanno.
1 Ka tirtir barnaamijyada horay loo rakibay ee ku shaqeeya Android
2 Ka tirtir barnaamijyada horay loo rakibay ee aan lahayn xidid
3 Ka tirtir barnaamijyada Android adiga oo aan raad lahayn
4 Ka tirtiro barnaamijyada Google Play
4.1 Laga soo bilaabo shaashadda guriga
4.2 Iyada oo loo marayo Settings
4.3 Iyada oo faylasha Google
5 Sida looga tirtiro barnaamijyada Samsung
6 Ka tirtiro codsiyada Huawei
Ka tirtir barnaamijyada horay loo rakibay ee ku shaqeeya Android
Marka markaa booskayaga terminal wuxuu bilaabaa inuu muujiyo astaamaha daalku, waxaad u maleyneysaa in waqtigii la gaadhay nadiifi dhammaan codsiyada in aadan ku isticmaalin terminal-kaaga ama aadan waligaa isticmaalin.
Mar alla markii aan ka wada tirtirnay dhammaan barnaamijyadii aan ku rakibnay Play Store, waa markii ugu dambaysay ee codsiyada lagu soo daray asal ahaan saldhiggeenna, midkoodna Google ama kuwa ay ku darsadeen soo saarayaasha kale sida Samsung, Huawei, Xiaomi ...
Codsiyadaan, oo lagu soo daray asal ahaan nidaamka, kama wada saari karno qalabkeena, waxaan kaliya ka joojin karnaa iyaga. Marka laga hadlayo codsiyada Google waxay ka dhigeysaa dhammaan dareenka adduunka maaddaama badankood ay isku xiran yihiin oo haddii aan ka saarno, way waxay saameyn ku yeelan doontaa sharafta nidaamka.
Si kastaba ha noqotee, tani kuma dhacdo codsiyada ay ku jiraan soosaarayaasha, codsiyada muhiim maahan isticmaalka caadiga ah ee aaladda, laakiin waxay ku dhexjiraan nidaamka qalliinka, markaa annagu iskama saari karno sidoo kale, iska jooji.
Markaad curyaamiso codsiyada, way joojinayaan inay kugu tusaan khaanadda arjiga, laakiin weli way joogaan, qaab qarsoodi ah ayaan dhihi karnaa. Wixii gab barnaamijyada ku shaqeeya Android, waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Waxaan marin u helnaa goobaha qalabkeena oo guji Aplicaciones.
Qeybtaan, waa inaan gujino codsi hooyo oo aan dooneyno inaan joojino.
Daaqadda xigta, guji Hawl gab.
Ka tirtir barnaamijyada horay loo rakibay ee aan lahayn xidid
Dhowr sano ka hor, habka kaliya ee lagu tirtiro barnaamijyada horay loo rakibay on a casriga ah waxay ahayd iyada oo la isticmaalayo xididka, rakibidda qolalka iyada oo aan codsiyada soo saaraha ama hawlwadeenka. Si kastaba ha noqotee, markii sanadihii la soo dhaafay, soo saarayaasha ayaa xirayay albaabkaan si aysan mar dambe suurtagal u ahayn in xidid looga dhigo tirtirida barnaamijyada qalabka casriga ah.
Nasiib wanaag, Iyagu muhiim maahan rukhsad xidid si loo baabi'iyo mid kasta oo ka mid ah codsiyada ay soo saaruhu ku jiraan qalabkeenna. Dabcan, howshu ma fududa maxaa yeelay waa inaan isticmaalnaa codsiga ADB, codsi loogu talagalay horumariyeyaasha oo noo oggolaanaya inaan marinno qadka amarka ee xarunteena si aan u tirtirno codsiyada aan rabno.
Nidaamka loogu talagalay ka tirtir barnaamijyada raad la'aan Waxaan ku sharaxeynaa qeybta xigta. Kahor intaadan hawshan fulin, waa inaad maanka ku haysaa in haddii aad qalabka ka soo celiso xoqida, dhammaan codsiyada aad tirtirtay dib ayaa loo heli doonaa mar kale, maaddaama hawshani ay dib u soo celinayso kaydka boosteejada iyada oo ka dhigaysa mid cusub oo ka baxsan sanduuqa.
Ka tirtir barnaamijyada Android adiga oo aan raad lahayn
Nidaamka meesha looga saarayo raad la'aan codsiyada warshadaha kaas oo aan ku sii deyno xarunteena, ma aha dhibaato fudud. Ka tirtiro codsi aan ii oggolaan doonin Waa mid ka mid ah weydiimaha aan ku helno marar badan Androidsis oo aan ku xallino qodobkan.
Si looga saaro codsiyada Android iyadoon laga tagin raad, waa inaan isticmaalnaa aaladda ADB (sidaan ku sharaxay qaybtii hore), oo ah aalad aad awoodid kala soo bax xiriiriyahan. Feeji faylka xididka nidaamka C: \_ waxaanan fulineynaa tillaabooyinka hoos ku faahfaahsan:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan dhaqaajino Fursadaha hormarinta (adigoo riixaya nambarka dhismaha dhowr jeer)
Marka xigta, waxaan dhaqaajineynaa qaabka Dib u dhigga USB.
Waxaan ku xireynaa taleefankeena casriga ah kombiyuutarka. Qalabkayaga daaqad ayaa lagu soo bandhigi doonaa taas wuxuu nagu casuumayaa inaan aqbalno furaha RSA in lagu fuliyo mudadaas kumbuyuutarka. Farsamadan waxay u adeegtaa inay damaanad qaado inaan helno furitaanka aaladda (kaalay, si aan u hubinno inay annaga tahay).
Kadib waxaan helnaa amarka degdegga ah iyada oo loo marayo sanduuqa raadinta ee Cortana adoo ku qoraya CMD.
Marka xigta, waxaan aadeynaa galka halka faylasha aan soo dejinay ku yaaliin oo waxaan ku soo guurinay salka kumbuyuutarkeena amarada "cd .." si aad ugu tagto tusaha hore iyo "cd directoryname" si aad u hesho galka. Si loo taxo liistada waxaan qornaa "dir". Amaradaas waa in la qoraa bilaa xigashooyin.
Mar alla markii aan ku jirno galka waxaan qornaa "aaladaha adb" (oo aan lahayn xigashooyinka) iyo qalab ku xiran.
Marka xigta waxaan qori "adb shell pm pack packages" adoon xigashooyinka sidaa darteed dhammaan codsiyada waa la soo bandhigayaa kumbuyuutarka lagu rakibay.
Markaan helno ku yaal magaca dalabka waxaan dooneynaa inaan ka saarno waa inaan qornaa "adb shell pm uninstall -k –user 0 package-name" (bilaa xigashooyinka) oo ah magaca xirmada arjiga aan rabno inaan ka saarno qalabkeena.
Xaaladdan, waxaan leenahay ka saaray barnaamijka Flipboard-ka (adb shell pm uninstall -k –user 0 flipboard.boxer.app) in Samsung ay kujirto boosteejooyinkeeda taasna nama siiso ikhtiyaarka aan ku baabi'in karno, iska jooji.
Ka tirtiro barnaamijyada Google Play
Laga soo bilaabo shaashadda guriga
Ka tirtirida codsi laga soo duubay shaashadda guriga oo ka imanaya Play Store waa sida ugu fudud ee:
Taabo kuna hay astaanta dalabka dhowr ilbidhiqsi.
Liiska macnaha guud ee muuqda, guji Macluumaadka dalabka.
Ugu dambeyntii, guji Koronto.
Iyada oo loo marayo Settings
Ikhtiyaar kale oo looga saari karo barnaamijyada taleefannadeena casriga ah Google Play Store waa iyada oo loo marayo Nidaamyada bartayada.
Gudaha goobaha ka terminalkeena, guji Aplicaciones.
Marka xigta, waa inaan gujinnaa arjiga taas waxaan rabnaa inaan tirtirno
Ugu dambeyntii, guji Koronto si looga saaro kooxdayada.
Iyada oo faylasha Google
Waxaan sidoo kale ka faa'iideysan karnaa Faylasha Google si looga saaro barnaamijyada keydka rasmiga ah ee barnaamijka Google.
Markaanu furno faylasha Google, waxaan raadineynaa qeybta Aplicaciones.
Liiska codsiyada, waxaan raadineynaa midkaas waxaan rabnaa inaan tirtirno oo guji saddexda qodob ee ku yaal meel qotoma.
Ugu dambeyntii, waa inaan gujino Koronto ka imanaya liiska xulashooyinka ee la soo bandhigay.
Sida looga tirtiro barnaamijyada Samsung
Nidaamka loo tirtiro codsiyada ku jira saldhiga Samsung wuxuu dhab ahaan la mid yahay kii hore, sidaa darteed waxaan isticmaali karnaa mid ka mid ah seddexda qaab in aan ku tilmaamay qaybtii hore.
Ka tirtiro codsiyada Huawei
Geedi socodka si loo tirtiro codsiyada lagu rakibay taleefanka casriga ee Huawei Waxay la mid tahay Samsung iyo dhammaan nidaamka deegaanka ee Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dhejiyo codsiyada
Shirka Mobile World Congress 2021 ee ka dhacaya magaalada Barcelona wuxuu noqon doonaa xagaagan wuxuuna yeelan doonaa caawimaad fool ka fool ah
Sida loo habeeyo waxyaabaha cusub ee loo yaqaan 'auto-downloads Netflix': cibaaro soo degsata dhacdooyin taxane ah oo aad daawato